Vacuum lab kessatti midhafame
Vacuumiin bakka waan tokkolle ofii kessa hiin qabni dha kanafu dhibaan qillensa vacuum kessa jirru Atmospheric Pressure ni calla. Maqaan vacuum jedhamu kuni maqaa Latin vacuus jedhamu irra dhufee, vacuus jechun immo duwwa jechu dha. Haa ta'u male bakki adunya kana kessa tokkollen duwwa mitti, manif? yoo jettanii vacuum kessayyu wanti lubbu hin qabne jirachu ni danda'a. Kanaf jechi afaan Latin vacuo jedhamu jecha vacuus irra fayyadamu jalqabame. Perfect vacuum jechun vacuum dhibaa qillensa duwwa qabu yoo ta'u jechii kuni jecha Philosophy malee vacuumiin akka adunya kessatti hin argamu. Kunis sababa quantum theory iin, bakkii tokkollen hundumatti duwwa ta'u hin danda'u jedhufi. Physicists yeroo bayye jecha "vacuum" jedhamu kan diqqo gorsani fayyadamu. Jechaa "perfect vacuum" jedhamu kana salphatti "vacuum" yokan "Free Space jedhani fayyadamu. Haa ta'u malee vacuum sirritti hin jirra jedhame mirkana'e warri "partial vacuum" jedhe wamma.
Quality iin vacuumii tokko akka dhihenna yokan wal-fakkattina perfect vacuum qabuu irratti hunda'e lakka'amma. Kan kessa dhibaan qillensa akka lakka quality vacuumii tokkotti fudhatama. Unittin dhibaa qillensa bayye fayyadatammu torr jedhama. Dhibaan diqqan quality gudda agarsisaa. Quality guddani vacuumiin qabachu danda'u Quantum Mechanics iin olka'amerra. Outer Space iin bakka umamman quality gudda qabu dha, kunii immmo vacuumii teknologii haraan midhafamu danda'an cuffa ni calla. Vacuumiin quality diqqa qaban kan harka naman midhafamani suction millennia fi fayyadamu.
Bara Ancient Greek jalqabee Vacuumiin akka wol-mormii Philosophy tti fayyadama turee, garuu qorannon isaa 17th Centuryitti jalqabe. Qo'annoni kunis kan jalqabee theory Evangelista Torricelli kan atmospheric pressure jedhamu irra jalqabe. Vacuumiin Century 20 jalqabee akka mesha Industry fudhatame, kunis light bulb fi vacuum tube midhafamu jalqabe jenan. Achiin bodaa teknologyiin vacuun bayyen bekkamu jalqabe. Fayyadamu Vacuum spaceflight irra ka'e qo'anno godhameni, Vacuumiin fayya namaffi barbachisa dha jedhame yaddatama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacuum&oldid=23460" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 17 Bitootessa 2014, sa'aa 19:39 irratti.